Kitra Toamasina : afaka handray lalao iraisam-pirenena ny “Stadium” | NewsMada
Kitra Toamasina : afaka handray lalao iraisam-pirenena ny “Stadium”
Ho kianja maoderina tsy ho ela intsony. “Tsy maintsy vita afaka enim-bolana ary handraisana lalao iraisam-pirenena avy hatrany aorian’ izany ny kianja fanaovam-baolina “Stadium” eto Toamasina”, hoy ny minisitra misahana ny tetikasan’ny filoham-pirenena, Rafidimanana Narison, ny herinandro teo tamin’ny fametrahana ny ahitra tsy voajanahary eo amin’ity kianja fanaovam-baolina ity. Nambaran’ny teknisianina kosa fa mbola betsaka ny asa miandry. Anisan’izany ny tokony hanamboarana ny lalana fidirana mandeha ao amin’ny kianja satria feno ranom-potaka rehefa avy ny orana. Fa eo koa ireo mpivaro-kazo, tsy mbola hitan’ny kaominina Toamasina ny hamindrana toerana azy ireo. Manampy izany ny fanarenana ireo efa vita teo aloha saingy simba an-toerana teo, nandritra ny fotoana maro.
Anisan’ny nambaran’ny minisitry ny Tanora sy ny fanatanjahatena, Andriamosarisoa Anicet ny alahelony nanesorana tamintsika ny handraisana ny Can U17, tokony natao teto Madagasikara ny volana avrily izao. “Matahotra ny firotsahan’ny kandidantsika amin’ny fifidianana filohan’ny Caf ny sasany ka milaza fa tsy manara-penitra ny kianja rehetra eto amintsika. Nekena hatrany anefa ny fifaninanana iraisam-pirenena rehetra natao tao amin’ny kianjaben’ i Mahamasina hatramin’izay“, hoy izy.
Tsiahivina fa nanomboka tamin’ny fitondrana Tetezamita ny asa fanamborana ity kianja ity ary tafiditra amin’ny fampanantenana nataon-dRajoelina tamin’ izany fotoana izany, ny hametraka kianja manara-penitra isaky ny Renivohi-paritany enina.